MCN နေ့စဉ် ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန် (၃၀) ရက် ကြာသပတေးနေ့ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နယျသတငျး MCN နေ့စဉ် ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန် (၃၀) ရက် ကြာသပတေးနေ့
MCN နေ့စဉ် ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန် (၃၀) ရက် ကြာသပတေးနေ့
မင်္ဂလာပါရှင်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ နေ့စဉ် ရုပ်သံအစီအစဉ်က ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၈ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၉)ရက် ခရစ်နှစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၃၀)ရက် ကြာသပတေးနေ့ ညနေ (၆) နာရီအထိ နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ သတင်းတွေကို တင်ဆက် ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာ ရှုစားကြရမယ့် သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့
1	နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ (DPN) နဲ့ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁-ရာစုပင်လုံ) အကြို ပြင်ဆင်ရေးကော်မတီတို့ဟာ မနက်ဖြန်မှာ အကြိုညှိနှိုင်းတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးသွားမယ့်သတင်း
2 ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ် နိုင်ငံခြားရေးအ တွင်းဝန် H.E. Mr. Md. Shahidul Haqueနဲ့ တွေဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်း
3	အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ယာယီညွှန့်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့လေကြောင်းထိုးစစ်ဆင်မှု အတွင်း အစ္စလာမ်းမစ်စစ်သွေးကြွ ၂၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း
စတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူ တခြားထူးခြားတဲ့ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သတင်းတွေကိုလည်း တင်ဆက်ပေး သွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleစီမံကိန်းကြောင့် သိမ်းဆည်းခံရတဲ့ လယ်ယာမြေတွေကို အစိုးရသစ်ဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆို
Next articleမိုးညို မြို့နယ်မှာ မြစ်ရေတိုက်စားတာကြောင့် လူနေအိမ် ၁၅၀ ကျော် ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေရ